Pejin-tranonkala TOP handefasana loharano maimaimpoana ho an'ny Adobe Illustrator | Famoronana an-tserasera
Ireo singa dia singa tena ilaina satria manome antsika fahalalahana hanao asa lehibe ary manome antsika famaritana avo na inona na inona ny ampahany iasantsika. Adobe Illustrator mamela anao hamorona volo na dia azontsika atao aza ny mahazo azy ireo amin'ny banky sary an-tserasera. Ho fanampin'izany, ny fampiharana dia ahafahantsika manamboatra sy mamolavola borosintsika manokana ary mametraka borosy ivelany. Azontsika atao koa ny manampy fitaovana ivelany hiasa ao amin'ny Illustrator toy ny style na texture. Androany isika dia hanao safidy amin'ireo pejin-tranonkala izay manome loharanon-karena indrindra ho an'ny Adobe Illustrator.
Na dia misy tranokala maro isan-karazany aza eto amin'ny Internet, dia vitsivitsy izao no nisafidianantsika, saingy mino izahay fa tena ilaina amin'ny mpamorona sary. Raha dinihinao izany dia azonao atao ny manampy anay hamita ity lisitry ny banky sary ity amin'ny alàlanay fizarana fanehoan-kevitra miorina amin'ny faritra ambany.
Hanomboka ny safidinay amin'ny iray amin'ireo banky famolavolana sary manan-danja miteny espaniola izahay, izay ny habetsaky ny fitaovana omen'ny Freepik dia tsy manam-petra. Eto ianao dia afaka mahita borosy, maodely isan-karazany ary sary vita amin'ny vector. Avy amin'ny sary ka hatrany amin'ny haingon-trano haingon-trano, karatra fandraharahana, karatra paositry na peta-drindrina. Ny tsara indrindra dia tsy mila karazana fisoratana anarana izy io, na dia tsy maintsy jerena ihany aza fa raha hampiasa ny fitaovany dia ilaina ny manonona ny mpanoratra. Miasa miaraka amina fahazoan-dàlana izy ireo.
Ity banky ity dia misy loharanom-pahalalana marobe isan-karazany amin'ny Adobe Photoshop sy Adobe Illustrator. Na dia marina aza fa karazana amateur indrindra izy ireo, dia dabilio izay tsy tokony ho tsikaritr'ireo mpamorona vaovao indrindra. Raha vantany vao misintona ny freebies-nao ianao dia azonao ampiasaina amin'ny fahalalahana feno na inona na inona zony na zon'ny mpamorona. Ho ara-dalàna tanteraka ny fampiasana ireo fitaovana nalaina tao amin'ny Bittbox ho an'ny tetikasa ara-barotra sy ny tetik'asa manokana. Mendrika jerena izany.
Izy io dia misy karazan-tsarimihetsika marobe, na amin'ny maody maimaimpoana na amin'ny maody premium. Izy io dia pejy misy foto-kevitra maro loha, na dia ny tena lesoka aza dia ny tsy fanamorana ny fikarohana amin'ny alàlan'ny lisitry ny sokajy. Na dia maharitra fotoana fohy aza ny fitetezana ny katalaogna iray manontolo dia mety ho mendrika izany satria misy sary mahaliana sy sary vita amin'ny vector. Izy io koa dia manana fizarana fampianarana izay hanampy anao hanamafy ny fahalalanao ilay fampiharana ary ho an'ny iray hafa ho an'ny loharano premium. Azo atoro!
Manolotra fijery tsy dia tia fihinana sy fotodrafitrasa lehibe kokoa ahazoana valim-pikarohana tsara. Ho fanampin'ny bara fitadiavana, dia misy sokajy samihafa, ao anatin'izany ny torolàlana, ny modely, ny fantsom-logo, ny sainam-pirenena, sns sns. Izy io koa dia manana safidy hidirana amin'ny atiny farany indrindra ka ho mora tokoa ny manaraka ny vaovao farany omen'ity banky ity antsika. Eto amin'ity pejy ity ianao dia afaka mahita ny vohikalan'ny sary mihetsika sy ny loko na ny monochrome ary koa tsy mila karazana fisoratana anarana.
Io dia ahafahantsika misafidy ny hiara-hiasa amin'ilay pejy ary hampiditra ny asanay ao amin'ny tahiry. Ahitana sokajy maro be: Abstract, orinasa, biby, sary miaina ... Manolotra motera fikarohana ihany koa izy (na dia toa ny ambiny amin'ireo safidy aza dia pejy amin'ny teny anglisy) sy faritra iray ampidirina ny vaovao farany. Zavatra iray ahafahantsika mitazona ny vaovao hatrany. Ny teboka miampy dia tsy mila fisoratana anarana izy io ary tsara ny hafainganam-pandehan'ny fampidinana sy ny fikarohana.
123 Vector maimaim-poana
Izy io angamba no mora indrindra amin'ny rehetra noho ny famolavolana sy ny toeram-pikarohana omeny. Ankoatry ny fampidirana ireo karazan-tsarimihetsika samihafa, dia misy koa borosy ary manolotra vokatra na amin'ny maody malalaka (freebies) na amin'ny maody premium. Tsy mila fisoratana anarana izany, noho izany dia haingana dia haingana ny fizotry ny fampidinana sy ny fampiasana, na dia ilaina aza ny miditra amin'ny atiny premium. Misongadina amin'ny kalitaon'ny fitaovana avoakany sy ny lohahevitra maro karazana izay ampiarahiny amin'ny pejiny. Recommended tokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » sary » Pejin-tranonkala TOP handefasana loharano maimaimpoana ho an'ny Adobe Illustrator
Oswaldo Montilla dia hoy izy:
Tena izy ireo no tsara indrindra
Valiny amin'i Oswaldo Montilla